Warlocks - WoW Guides | WoW Guides (Pejy 2)
Fahoriana Warlock - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Talenta, statistika, famosaviana ary vatosoa ilaina amin'ny fampiasana tsara ny World of Warcraft Affliction Warlock mandritra ny Legion Patch 7.3.5.
Talenta, statistika, famosaviana ary vatosoa ilaina amin'ny fampiasana tsara ny World of Warcraft Demonology Warlock mandritra ny Legion Patch 7.3.5.
Fandringanana Warlock - Guides PVE - Patch 7.3.5
Talenta, statistika, famosaviana ary vatosoa ilaina amin'ny fampiasana tsara ny World of Warcraft Destruction Warlock mandritra ny Legion Patch 7.3.5.
Fahoriana Warlock - Torolàlana PVE - Patch 7.3
Tongasoa eto amin'ny fijalian'ny mpamosavy nataon'i Anezalis-ColinasPardas. Haneho anao i Anezalis hoe iza no talenta sy fitaovana tsara indrindra.
Demonology Warlock - Torolàlana PVE - Patch 7.0.3
Tongasoa eto amin'ity torolàlana Pve Demonology Warlock ity, ao no hanazavako ireo fanovana efa nataontsika taorian'ny patch 7.0 sy ny fomba hanararaotana azy ireo.
Yuki maneho hevitra momba ny Destruction Warlock - Yuki Series - Legion
Tongasoa eto amin'ity torolàlana horonantsary vaovao an'i Yuki maneho hevitra momba ny Destruction Warlock ity, izay ahitantsika ny fahaiza-manao, talenta ary artifact amin'ity kilasy ity.
Fandravana Warlock PvP Talents - Legiona Beta
Izahay dia mijery ny talenta PvP vaovao an'ny Destruction Warlock, vaovao amin'ny rafitra fanajana Legiona vaovao. Legion beta manangana 21691
Demonology Warlock PvP Talents - Legiona Beta
Izahay dia mijery ny talenta PvP vaovao an'ny Demonology Warlock, vaovao amin'ny rafitra fanajana Legiona vaovao. Legion beta manangana 21691
Fijaliana Warlock PvP Talents - Legiona Beta
Izahay dia mijery ny talenta PvP vaovao ho an'ny fijaliana Warlock, vaovao amin'ny rafitra fanajana Legiona vaovao. Legion beta manangana 21691
Tehim-panjakan'i Sargeras - Fantaro ny toetrany - Legiona Alpha
Nandinika ny toetra sy ny toetran'ny tehina Sargeras izahay, fitaovam-piadiana vitan'ny Warlock Destruction tao amin'ny Alpha of Legion.
Fandringanana Warlock amin'ny Legiona - Fahaiza-manao sy talenta - Legiona Alpha
Izahay dia mamerina mijery ny fanovana ny Talenta sy ny Fahaiza-manao izay hijaly ao amin'ny Legion ny Destruction Warlock.
Demonology Warlock Artifact - Karandohan'ny Man'ari - Legiona Alpha
Izahay dia manatanteraka ny iraka voalohany hahazoana ny Demonology Warlock Artifact, Skull of the Man'ari. Izahay dia mitondra anao ny horonan-tsary miaraka amin'ireo iraka.
Yuki maneho hevitra Demonology Warlock - Yuki Series - Legion
Tari-dahatsary vaovao an'i Yuki maneho hevitra momba ny Demonology Warlock, ao no ahitantsika talenta, fahaizana ary artifact an'ity kilasy ity.
Karandohan'ny Man'ari - Fantaro ny toetrany - Legiona Alpha
Nandinika ny toetra sy ny toetra mampiavaka ny Ikarandohan'ny Man'ari, fitaovam-piadiana vitan'ny demonia demonia tao amin'ny Alpha of Legion.
Demonology Warlock in Legion - Fahaiza-manao sy talenta - Legiona Alpha
Izahay dia mamerina mijery ny fiovana eo amin'ny Talenta sy ny Fahaiza-manao izay hataon'ny Warlock Demonology ao amin'ny Legiona.
Ady amin'ny legiona Warlock - Fahaiza-manao sy talenta - Legiona Alpha
Izahay dia mijery ny fanovana ny Talenta sy ny fahaiza-manao izay hanjo ny Warlock Fijaliana ao amin'ny Legiona.
Fijaliana Warlock Artifact - Ulthalesh, ilay mpamboly ny fahafatesana - Legiona Alpha
Nahazo ny fijaliana Warlock Artifact, Ulthales, ilay mpijinja ny fahafatesana. Raha dinihina, ity horonan-tsary ity dia misy mpandrava tantara ratsy.
Fiovana ho an'ny Warlock amin'ny Legiona - Fandrosoana
Tongasoa eto amin'ny topi-maso kilasy Legiona. Amin'ireto lahatsoratra ireto dia halefanay ny fanovana ny kilasy ao amin'ny WoW Legion. Manomboka amin'ny Warlock in Legion izahay.
Fitaovam-piadiana Artifact: Warlock
Asehonay aminao ny fanitarana fampahalalana momba ny fitaovam-piadiana mahery vaika warlock ao amin'ny World Of Warcraft: Legion.
Ny tsipika fikatsahana efa nandrasana hatry ny ela ho an'ny Warlocks dia misokatra amin'ny fitsapana amin'ny PTR 5. Manana fitsidihana ireo misiôna izahay, fandikana ireo zava-nitranga tao amin'ilay lore, horonantsary an'ny sefo farany ary m
Rojom-pikarohana epic ho an'i Warlocks mifandray amin'ny Council of the Dark Harvest
Rojo fikarohana marobe no trandrahana tao amin'ny PTR 5. 1: Androany dia hijery fizarana epic ho an'i Warlocks mifandray amin'ny Council of the Dark Harvest isika. Miorina amin'ny The Codex of Xerrath, manana h izy
PvE Warlock Guide - Patch 4.0.6
Miaraka amin'ity torolàlana Warlock PvE ity dia manomboka ireo mpitarika kilasy Cataclysm GuiasWOW izahay. Nanomboka tamin'ny mpamosavy izahay satria ity mpilalao ity no tena mpilalao ahy. Ny tanjona dia ny hanombohana amin'ny famoahana a
Aorian'ny 4.0.1 ... Hanao ahoana ny Brujo-ko?
Andao hojerentsika foana hoe inona ny fanatsarana (tsara ... momba ny fanatsarana izany, tokony ho hitantsika), vaovao (oh, eny, hitanao fa vaovao ny zava-drehetra), miova? (Tiako kokoa izany!). Eny ary, inona ny fiovana entin'ny patch 4.0.1 ho an'ny mpamosavy. Ary raha ny marina, ampahafantariko anao ny iray amin'ny ego ego-ko. Ahoana ny hevitrao? Inona no mety ho vendrana sy salama saina? Tongava re rangahy!
El ody mbola manana ny specs dps azy ihany izy. Ny fijaliana dia manararaotra fahasimbana bebe kokoa rehefa mandeha ny fotoana, ny Demonolojia amin'ny fahasimban'ny demoniao, ary ny Fandringanana amin'ny fahasimban'ny afo mivantana. Ka ... inona no niova ho an'ny mpamosavy? Andao jerena haingana.
Ny «Kilasy» an'i Môrtifilia: Pretra
Eny, rehefa afaka tapa-bolana tsy misy "kilasy Môrtifilia" dia andao tohizina, miaraka amin'ny kilasy farany sisa tavela, ny Pretra. Soa ihany fa masina izy ireo ary tsy ho tezitra.
-Valio !!!! (Manilika saina ny Pretra)
-Hey? Inona? Andraso - nanomboka nihira sy nandihy i Môrtifilia - kaopy aho, vilany, lovia lalina ... - Nihifikifi-doha i Môrtifilia - Hahaha, Tena mampihomehy ... (Tokony ho hitanao ny mampisy ireo mpiaro hazavana, eo anelanelan'izy ireo. ary ny paladin ...)
-Mba misy manohitra ve?
-Tsy izany! Tsy misy na inona na inona…
Hevitra: momba ny fanovana ny Warlock nataon'i Missfit
Azo inoana fa manaraka ny fiovan'ny kilasy ianao ody ho an'ny Cataclysm ary ankehitriny, manana isika ny hevitr'ireo izay milalao ny kilasy momba ny fiatraikan'izany fiovana izany. Noho izany, mangataka aminao izahay hampiasa ny rafi-pifidianana lahatsoratra hanombanana ny lahatsoratra an'ny miss fit am-pahamendrehana ary noho izany manome valisoa azy na, ny mifanohitra amin'izany aza, kapohy amin'ny loharano Dalaran. (Tsy sangisangy izany)
Raha mbola tsy hitanao izay miandry an'i Brujo dia aza hadino ny mijery ny fanovana ho avy. Hanohy hamoaka ny hevitrao izahay ary, raha sahy ianao, dia azonao atao ny mijery mijery ny fomba mandray anjara amin'izany ny hevitry ny kilasy.
Izahay dia miafina ao ambadiky ny critters ratsy tarehy miaraka amin'ny famaky lehibe kokoa noho ianao. Izahay apetaka aminao ny sticker, ary mihazakazaka izahay (satria manana azy ireo). Miantso anao izahay raha kamo ianao ka tsy mandeha amin'ny sidina akaiky indrindra. Fa ambonin'izany rehetra izany dia mandrangitra tahotra izahay, tahotra be. Isika no mpiady, ary ao anatin'ity kilasy ity dia hanome ny hevitro manetry tena aho momba ny fanovana izay hisy fiantraikany aminay amin'ny fanitarana fahatelo an'ny World of Warcraft: Cataclysm. Holazaiko aminao ny anarako, azo antoka fa henonao teny amin'ny aloka io: Missfit. Milalao ao amin'ny mpizara PvP Zul'jin aho, ary fantatry ny mpiara-miasa amiko (manoroka an'i TsuNaMi) ho Oracle aho. Muwhahahahahahahahaha ...
Belelros dia mampirehitra ny jiro Guideswow. -Iza no maty namono jiro!?
Natao ho an'ny atmosfera rangahy io.>
Hevitra: momba ny fanovana ny Brujo nataon'i Môrtifilia
Azo inoana fa manaraka ny fiovan'ny kilasy ianao ody ho an'ny Cataclysm ary ankehitriny, manana isika ny hevitr'ireo izay milalao ny kilasy momba ny fiatraikan'izany fiovana izany. Noho izany, mangataka aminao izahay hampiasa ny rafi-pifidianana lahatsoratra hanombanana ny lahatsoratra an'ny Mortiphilia am-pahamendrehana ary noho izany manome valisoa azy na, ny mifanohitra amin'izany aza, kapohy amin'ny loharano Dalaran. (Tsy sangisangy izany)
Andao hijery kilasy foana. Andao hojerentsika hoe inona ny fiovana miandry anao ao amin'ny Cataclysm. Averiko indray, ny hevitro dia tsy miorina afa-tsy amin'ny teôria, satria ny mpamosavy ahy dia mbola haavo 60 ihany ... faly kokoa izy, any Outland, izay hividy trano kely any amin'ny Hellfire Peninsula ^^. Efa mikorontana ...
Ny kilasin'i Môrtifilia: ilay mpamosavy
Amin'ity herinandro ity isika dia hahita ny lafiny maizin'ny WoW. Mihoatra ny maizina, manjombona. Kilasy somary liana te hahalala zavatra, izay tsy mampiseho tahotra, dia afaka mandresy demonia izay mandroso ary mamono ny fahavalony na dia maty aza izy ireo.
Marina izany, horesahiko ody.
Hevitra: momba ny Warcommander dia miova amin'ny Warlock
Azo inoana fa manaraka ny fiovan'ny kilasy ianao ody ho an'ny Cataclysm ary ankehitriny, manana isika ny hevitr'ireo izay milalao ny kilasy momba ny fiatraikan'izany fiovana izany. Noho izany, mangataka aminao izahay hampiasa ny rafi-pifidianana lahatsoratra hanombanana ny lahatsoratra an'ny Mpiady ady am-pahamendrehana ary noho izany manome valisoa azy na, ny mifanohitra amin'izany aza, kapohy amin'ny loharano Dalaran. (Sangisangy izany)
Salama! Izaho dia Warcommander an'ny Fanjakana mirenireny, azonao atao ny mamantatra ahy amin'ny lahatsoratra toy izany Ireo Andriamanitra taloha tao Azeroth o Tank Warrior Guide. Aorian'ity lahatsoratra Troy Macclure ity dia hiresaka aminao momba ny hevitro momba ny fanovana ny mpamosavy satria, ankoatry ny mpiady ahy dia manana kilasy marobe ihany koa aho (iza koa no heverinao fa mandoa ny fanamboarana?).
Momba ny ozona vaovao
Afo maloto ve izany? ody mahafinaritra be inona izany? nampiasaina tamin'ny famaritana talenta rehetra noho ny famerenana amin'ny laoniny? ny faharetan'ny DpT fototra, ary koa ny famosaviana eo no ho eo, izay azonao alefa rehefa mihetsika: tena ilaina amin'ny PvP sy PvE. Izy io koa dia manana endrika ivelany izay nitalahoantsika hoe: afo maitso (Wuuuajuuu !!).
Fanavaozana ny tranofiara Warlock ao Cataclysm
Ilay tranofiara Warlock dia nohavaozina tamina fanontaniana sy valiny vitsivitsy avy amin'ireo mpampiasa. Zarhym no ...
Fampandrosoana kilasy amin'ny cataclysm: Warlock
Ao amin'ny World of Warcraft: Cataclysm dia hanao fanovana maro isika ary manampy talenta sy fahaizana ho an'ny kilasy tsirairay. Amin'ity topi-maso ity dia hanana fotoana hianarana momba ny sasany amin'ireo fanovana nokasainay ho an'ny mpamosavy izahay; Ho fanampin'izany, hanome anao topy maso ny sasany amin'ny famosaviana vaovao, ny fahaiza-manao, ny talenta izahay ary ny topy maso momba ny Mastery System vaovao sy ny fomba fiasan'izy ireo miaraka amin'ireo mason'ny talenta samihafa.
Famosaviana vaovao amin'ny vala
Fel Flame (Misy amin'ny ambaratonga 81): Famosaviana eo no ho eo izay manisy fahasimbana amin'ny afo sy ny aloka (shadowfire); Izy io dia hitovy amin'ny ody Frostfire an'ny mpanao majia, izany hoe ny fanoherana izay mora tohina indrindra (amin'ny lafiny alokaloka sy afo) hampiasaina hikajiana ny fahasimbana. Ho fanampin'izany, i Fel Flame dia hamerina ny kaontera amin'ny Immolate sy ny fijaliana tsy milamina. Ny tanjonay miaraka amin'i Fel Flame dia ny hanomezana fahaiza-manao mahasoa sy finday izay afaka ampiasain'ny Warlocks of Destruction and Demonology; Tsara ny manamarika fa ity fahaizana ity dia hampiasa lelafo maintso ary ho ody eo noho eo.
Fikasana maizina (haavo 83): Mampitombo ny vintana ny kendrena hataony amin'ny fikorontanana amin'ny 3%; Rehefa mamely tampoka ny tanjony dia hahazo buff ny Warlock izay hampitombo ny fahasimbany mandritra ny 10 segondra; ity vokatra ity dia miangona hatramin'ny in-3.
Fanahy demonia (haavo 85): Atambaro ny fanahin'ny mpanao ody amin'ny demony; Demon Soul dia hanome ny Warlock buff izay hampitombo be ny fahavoazany mandritra ny fotoana fohy. Ny vokatra manokana azo amin'ny alàlan'ity fahaiza-manao ity dia miankina amin'ny demonia nofinidiny. Ny faharetan'ny 'Demon Soul dia miankina amin'ny demony ampiasainy ary hiankina amina fiampangana voafetra na mandra-pahafatiny (20 segondra eo ho eo); Ho fanampin'izay, hanana cooldown 2 minitra.
PvP Warlock Guide - Patch 3.3
Elæsandrøs avy any C'Thun, dia nandefa torolàlana feno momba ny PvP Warlock ao amin'ny Patch 3.3, miaraka amin'ity torolàlana ity ahafahantsika mahafantatra ny lafiny tsirairay amin'ny Warlock ho an'ny ady, mikasika ny lafiny rehetra amin'ny potion sy glyphs ka hatramin'ny demonia ary koa ny horonan-tsary momba ny fomba hampiasa an'ity kilasy ity.
Mety ho toa fanontaniana adaladala izany, saingy zava-dehibe ny hanazavana mazava ireo hevi-dehibe mety hoheverina ho miharihary aza. The Warlock dia mpanamboatra lamba dps mitafy lamba izay anjarany, ao amin'ny PvP, no manome fanaraha-maso sy fahasimbana. Izy dia manana biby fiompy demonia izay manohana azy amin'ireo asany ireo.
Mba hilalaovana ady amin'ny PvP dia ilaina ny mieritreritra ireo hevitra ireo.
a) Miankina amin'ny tempoly isika
Midika izany fa raha tsy misy fahasarotana dia tsy misy dikany ny mpanao ody. Tsy toy ny mpamosavy, izay noho ny famolavolana kilasiny dia mahazaka mitondra sombin-PvE vitsivitsy, ny Warlock dia tsy afaka mamoy kely na kely aza, satria tsy misy fomba hafa azo iainana, ity stat ity no hamaritra ny fiaretany mandritra ny fivoriana.
Tany am-piandohana dia tsy maintsy mitady mandrakariva ny ekipanay herin'ny tsipelina y tempoly. Raha mijaly isika, ankoatry ny fahononam-po, maika, raha ny fiovana eo amin'ny sampana no ho avy.
Resadresaka ifanaovana amin'i Ghostcrawler momba ny Warlocks
Androany dia manohy ny Q&A izahay miaraka amin'i Greg "Ghostcrawler" Street sy ny ekipa fampandrosoana. Mandinika ny kilasy tsirairay izahay ary hamaly ny fanontaniana lehibe napetraky ny fiarahamonina. Handinika ireo fanontaniana napetraka matetika momba ny kilasy Warlock izahay ary hamotopototra ny filozofia famolavolana izay an-kilasy an'ity kilasy ity, ny andrasana ary izay antenaina hitranga.
Ekipan'ny vondrom-piarahamonina: Tianay ny manomboka an'ity tsingerin'ny fanontaniana sy valiny ity amin'ny fanontaniana apetraky ny mpilalao matetika momba ny tanjon'ny kilasy tsirairay. Amin'ity tranga ity dia hifantoka amin'ny mpamosavy isika.
F: Amin'ny firy no misy ny mpamosavy amin'izao fotoana izao ary aiza no hitiavanao azy?
Warlock-Tank Guide 3.1
Warlock's Guide Tank 3.1